Myitter - Page 8 of 16 - News and Media
မန်းသူ/မန်းသားတွေညီညွတ်ချက် . . .
May 28, 2020 Myitter 0
မန်းသူ/မန်းသားတွေညီညွတ်ချက် ဒီနေ့နေ့လည်ပိုင်းScoopyi နဲ့ ကောင်မလေးဆီကဖုန်းလုပြီးထွက်ပြေးလို့ လိုက်ဖမ်းကြတယ် ​မောင်းတာမြန်ချက် စကူပီနဲ့တောင်မနဲလိုက်ရတယ်နောက်ဆုံး ဒိုတစ်စီးနဲ့ နောက်ထပ်ဆိုင်ကယ်တစ်စီးကဆိုင်ကယ်ချင်းဝင်တိုက်ပြီးဖမ်းပေးမှမိသွားတယ် ဖမ်းမမိလောက်ဘူးထင်ပြီး နောက်ကလိုက်ဖမ်းတဲ့သူတွေကိုလှည့်ဆဲသေးတာတဲ့ဗျ၂ ​ယောက်ဖမ်းမိပါတယ်၃၆လမ်း၊ ၈၀x၈၁ ကြားမှာမိတာပါ…… နောက်ကဆိုင်ကယ်ကိုယ်စီနဲ့လိုက်ပြီးဝိုင်းဖမ်းတဲ့ ညီအစ်ကိုတွေတော်ပါတယ်ဗျာ….လေးစားပါတယ်ဗျ source & photo crd – Nay Nat Nwe unicode […]
အိုနသေညျ့တိုငျ တဈလမျးဝငျတဈလမျးထှကျ ပဲပွုတျတူတူရောငျးပွီး ရှာစားနရှောတဲ့ အဖိုးအဖှား . . .
ပရိသတျကွီးရေ အသကျကွီးပမေယျ့ တဈဦးအပျေါတဈဦးသစ်စာမပကျြဘဲ မောငျတထမျးမယျတရှကျလုပျကိုငျစားသောကျနတေဲ့ အဖိုးနဲ့ အဖှားအကွောငျးလေး ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော… ခမျြးသာမှု မရှိကွပမေယျ့ အိမျထောငျဖကျတဈဦးထကျ ပိုတဲ့ ဘဝအဖျောမှနျကောငျး တဈဦးရဲ့ ဖေးကူမမှုတှနေဲ့အပေးအယူမြှပွီး စိတျခမျြးသာနတေဲ့ဒီ အဖိုးနဲ့ အဖှားရဲ့ အိမျလေးဟာဖွငျ့သေးငယျပွီး မထညျဝါသညျ့တိုငျမတ်ေတာတှေ လှမျးခွုံတဲ့ အိမျ… နှလုံးသားတှေ နှေးထှေးလုံခွုံစတေဲ့ အိမျဖွဈနမှော ဧကနျမလှဲ […]
လက်သန်းလေးမှပြောပြသော သင့်ရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား . . .
သင့်ရဲ့လက်သန်းပုံစံကဖော်ပြနေသော သင့်အကြောင်းများ လူတစ်ယောက်ရဲ့လက်ဖဝါးက သူ့ဘဝ အကြောင်းတွေနဲ့များစွာပတ်သက်နေလေ့ရှိတယ်လို့ ခေတ်အဆက်ဆက် ပညာရှင်တွေက ယုံကြည်ခဲ့ ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တိုိ့ဆီမှာလည်း လက္ခဏာ ပညာရပ်က ထင်ရှားတဲ့ပညာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သင့်လက်က ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါမလဲဆိုတာ ကြည့်ပြီးရင် အဖြေတွေကို တစ်ပုံချင်းစီမှာ ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ မြိုသိပ်လွန်းသူ (A) ပုံနဲ့တူတယ်ဆိုရင်တော့ သင်ဟာ […]
ပရိသတျကွီးရေ ဟနျသာမိုး ဟနျသာဖွိုး အမှာညီအဈကိုကို သိကွမှာပါနျော…Myanmar Got Talent ပွိုငျပှဲမှာ ထူးခြှနျစှာယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ မိုး ဖွိုးအမှာလေးဟာ ခုဆို မိဘကို အသကျငယျငယျနဲ့ လုပျကြှေးနတောပါ… အသကျ ၄နှဈမှာ သူတို့ ဝါသနာပါတဲ့ သဘငျအက နဲ့ စတငျ ကခဲ့ပွီး အသကျ ၇နှဈမှာ […]
ဧရာမမြွေနဂါးခေါင်းပြတ်ပုံ ကျောက်ဆောင် နှင့် ရစ်ခွေနေသော ကိုယ်ခန္တာပုံ လျှိုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိ . . .
ထိုင်း – လာအို မဲခေါင်မြစ်ဝှမ်းဒေသအနီးက တောထဲမှာ ဧရာမမြွေနဂါးခေါင်းပြတ်ပုံ ကျောက်ဆောင် နှင့် ရစ်ခွေနေသော ကိုယ်ခန္တာပုံ လျှိုကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိ ထိုင်း နှင့် လာအိုနှစ်နိုင်ငံရဲ့ တောတွင်းတစ်နေရာမှာရှိတဲ့ ” နဂါးဂူ ” လို့ ခေါ်တဲ့ ” ထမ့်နားခါး ” ဂူဟာ ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ […]
ဖုန်းစခရင်ကို ကြည့်ကာ တရှုပ်ရှုပ် နမ်းလိုက် ငိုလိုက်.. ပါးစပ်ကလည်း “စိတ်ချမ်း သာစွာနဲ့ သွားပါတော့ ရှင်” လို့ ရေ ရွတ်ကာ နှုတ်ဆက်နေရှာပါတယ် . . .
ဖုန်းစခရင်ကို ကြည့်ကာ တရှုပ်ရှုပ် နမ်းလိုက် ငိုလိုက်..ပါး စပ် ကလည်း “စိတ်ချမ်းသာ စွာ နဲ့ သွားပါတော့ ရှင်” လို့ ရေရွတ်ကာ နှုတ်ဆက်နေရှာပါတယ် ဪ…. Covid ကာ လ ဘဝေတြ…. မေလ (23) ရက်နေ့ ညနေမှောင် ရီတရော […]
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သော လယ်သမားကြီး ဦးမြင့်အောင် . . .
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သော လယ်သမားကြီးဦးမြင့်အောင် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဦးဆုံး မိမိကိုယ်ကို မီးရှို့ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့သော လယ်သမားကြီးဦးမြင့်အောင်ရဲ.နောက်ဆုံးခရီး ။ ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ ရေပူကျေးရွာမှာ အစိုးရ တပ်မတော် အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်က သိမ်းထား တဲ့လယ်ယာမြေတွေ ပြန်ပေးဖို့၊လယ်သိမ်းခံပြည်သူများ၏ဘဝကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်အနေဖြင့် မေလ ၂၁ရက်က […]
May 27, 2020 Myitter 0
ယခု သတင်းကို ( ဒေါက်တာ မြဝတ်ရည် ) စာမျက်နှာ မှ တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေ တင်ဆက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည် မေ ၂၇ ရက်မှာ လက်မှတ်ရေးထိုးဖြစ်အောင် အဖက်ဖက်မှ အစစအရာရာ ဖြည့်ဆည်းကူညီပေးကြတဲ့ နှစ်ဖက်သော မိဘဆွေမျိုးများနဲ့ လိုအပ်သမျှ အကြံပေးကူညီဖေးမကြသော မိတ်ဆွေများ […]
ပုရစ်ကြော် ၁၀ ကောင်လောက်စားပြီး နာရီဝက်အတွင်း ယားပြီးနီရဲလာတာနဲ့ ဆက်မစားရဲတော့ပဲ စားပွဲပေါ်မှာ ပုရစ်ကြော်ဘူး တင်ထားလိုက်သာအခါ . . .
ပုရဈကွျော ၁၀ ကောငျလောကျစားပွီးနာရီဝကျအတှငျးယားပွီးနီရဲလာတာနဲ့ ဆကျမစားရဲတော့ဘူး စားပှဲပျေါက ပုရဈကွျောဘူးကို ညကြ ပုရှကျဆိတျတကျလာတယျ နောကျနေ့ သနေတေဲ့ ပုရှတျဆိတျအပုံသာကွညျ့တော့ဘယျလောကျ ပိုးသတျဆေးတှသေုံးပွီး ဖမျးထားလဲ မသိဘူး လူစားရမဲ့ ပုရဈကို ပိုးသတျဆေးသုံးပွီး ဖမျးသတျတယျဆိုတော့ ပွောစရာမရှိတော့ဘူး လူလညျး အခုထိလညျး နလေို့မကောငျးဘူး Aung Myin Kyaw […]
ဂျေါဖီထုပျတောငျသူမြားကို ကူညီပံ့ပိုးခွငျး . . .
ဂျေါဖီထုပျတောငျသူမြားကို ကူညီပံ့ပိုးခွငျး ကြှနျမဖဖေေ ဦးအောငျကိုဝငျးက ဝယျယူမယျ့သူမရှိလို့ ဖကျြဆီးရတော့မယျ ဂျေါဖီထုပျ (၅) သိနျးကြျောကို ဂျေါဖီထုပျတောငျသူမြားတှအေား ကူညီဖို့အတှကျ ကိုယျတိုငျသှားရောကျဝယျယူခဲ့ပွီး ကုနျတငျကားကွီးမြားနဲ့ ဖွနျ့ဝလှေူဒါနျးနပေါတယျ။ ရှမျးပွညျနယျတောငျပိုငျးက ပအိုဝျ့၊ တောငျရိုးနှငျ့ ကယနျးတိုငျးရငျးသားတှေ စိုကျပြိုးထားတဲ့ ဂျေါဖီထုပျရေ (၅) သိနျးလောကျ ရှိမယျလို့ ခနျမှနျးတာကွောငျ့ ဖဖေကေ […]